शताब्दीमा अफ्रिकी - जुने अफ्रिक - टेलि रिले बुचिर बेन याहमद
शताब्दीमा अफ्रिकी - बुचिर बेन याहमद - जुने अफ्रिक
ज्यून अफ्रिक र ला रेव्यूका संस्थापक, प्रतिबद्ध पर्यवेक्षक र स्तम्भकार, बीबीवाई अफ्रिका र मध्य पूर्वका सबै उत्थानहरूको लागि विशेषाधिकार प्राप्त भएका छन्। उहाँ मे on मा पेरिसमा मर्नुभयो।
आफ्नो संस्मरणहरुमा, प्रकाशित गर्न तर जसमा, एक सिद्धतावादीको रूपमा र उहाँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि, बशीर बेन याहमादले १० बर्ष भन्दा बढी समयदेखि काम गरिसकेका थिए, उनी आफैंलाई थोरै हुन राजी भए। कागजमा तल राख्दै ऊ आफैंले देख्यो। उसको लागि एक दुर्लभ र निस्सन्देह कठिन व्यायाम। उनले आफूलाई पत्रकार, उद्यमी, बाँया मानिस भएको वर्णन गरे। कसैलाई आफू जिद्दी भएको कुरालाई वेवास्ता गर्दै, उनले सच्याए: "लगनशील"। अधिनायकवादी? "यो एक पौराणिक कथा हो", उनले आफ्नो युवावस्थामा "बिरामी लजालु" भएको र यो चरित्रको विशेषताले कहिलेकाहि अचानक अकस्मात् दृष्टिकोणको बारेमा वर्णन गरेको कुरा बताउनु अघि आश्वासन दिए।
युवा अलगाववादी कार्यकर्ताहरूको पुस्ताबाट आएका उनले आफ्ना अधिकांश साथीहरूको भन्दा भिन्न मार्ग अनुसरण गरेका थिए र भने कि उनलाई कुनै पछुतो छैन, बिल्कुल विपरीत। "मेरा सबै कान्जेनरहरूमध्ये, भावी वरिष्ठ कार्यकारीहरू, तेस्रो विश्वको भर्खरका कसैले पनि मैले लिएको मार्ग अनुसरण गरेनन," उनले लेखे। धेरैजसो मन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक कर्मचारी, प्रधानमन्त्री, कहिलेकाँही राज्यका प्रमुख पनि भएका छन्। "
२ Minister मा मन्त्री
युवा अफ्रिका, उनले भने उनको जीवनको काम। जब उनीहरु बुर्गुइबाको पहिलो सरकारका सदस्य हुन् भनेर चिनिन्थे, दशक पछि उनीहरु त्यो आश्चर्यजनक काममा लागे कि उनले यो खाडल खनेनन् र "के भयो" भनेर सोधे ताकि युवा र आशावादी मन्त्रीले राजनीतिमा आफ्नो पिठ्यूँ फर्काए। कुनै हिचकिचाहट बिना जवाफ दिए: "यो भयो जुन मैले चाहिनँ।" किनकि त्यहाँ तिर्नुपर्ने मूल्य छ, जुन मैले भुक्तान गर्न अस्वीकार गर्छु। म राजनीतिज्ञहरु लाई गर्न को लागी आवाज गर्नका लागि चाहन्न: भीख माग्नु, त्याग गर्नु, सम्झौताहरु कि सम्झौता हो। म यसको लागि असक्षम छु। "
भिन्सेन्ट फोर्नियर / JA
बशीर बेन याहमाद - "बीबीवाई" - छ दशक भन्दा बढी समयका लागि थिए र सबैभन्दा पहिला सबै पत्रकार र प्रेस हाकिम थिए। "एक महान प्रेस हाकिम," फ्रान्सेली अडियोभिजुअल उद्योग को पूर्व प्रमुख, Harভে Bourges, अफ्रिका को प्रेम को आफ्नो शब्दकोश मा जोड दिए। २०२० मा उनको मृत्यु भएको टेलिभिजनका व्यक्तिले भने, "अफ्रिकामा यो महान पेशा प्रयोग गर्ने उनी पहिलो व्यक्ति थिए।" अफ्रिकी अभिव्यक्तिको यस निर्माणमा विश्वासयोग्य, दैनिक वार्ताकार, [महादेशका नेताहरूका साझेदार]। अवश्य पनि, कहिलेकाँही उनीहरूले उनको डायरीमा प्रतिबन्ध लगाए, उनलाई फेरि अधिकृत गरे, उनीसँगै लडे, उनलाई मन पराए वा घृणा गरे। तिनीहरू जहिले पनि उहाँलाई मूल्यवान छ। "
ह्युरो बुर्जेसको निष्कर्षमा रहे ज्यून अफ्रिकले भने, "सम्पूर्ण महाद्वीपको सामूहिक चेतनाको प्रतिनिधित्व गर्न आए जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसले बुझ्न गाह्रो भयो। माग गर्दै भूमिका, राख्न असम्भव। र अझै, चुनौती मात्र मिलेन, तर मिलेको छ। "
जर्बा टापुबाट ट्यूनिस सम्म
त्यस व्यक्तिको कथा जुन टुनिसको दक्षिणी भागमा, जेरुन अफ्रिक शीर्षकबाट अभिन्न रूपमा परिणत हुने थियो। बुचिर बेन याहमादको जन्म २ अप्रिल, १2२1928 मा भएको थियो। उनका आमा बुबा, अमोर र स्लीमाका एक दर्जन बालबालिका थिए। केवल पाँच जना बाँच्नेछन्, चार केटाहरू र एक केटी। जेठो, सदोक, १ 1915 १। मा जन्मेका थिए। उनको पछि ओमान र ब्राहिम थिए, तब, १ 1923 २ in मा, टेम्ना। त्यसैले बशीर सबैभन्दा कान्छी छन।
धेरै जसो यस टापुमा ठूलो स्रोतहरू बिना नै भएको पाइन्छ, उनका बुबा मुख्य भूमि ट्युनिसिया एक व्यापारीको रूपमा काम गर्नका लागि गए, जुन डर्जियनवासीहरूको दोस्रो प्रकृति जस्तै हो। सफलता बिना होईन, किनभने कडा परिश्रम र उसको व्यवसायिक चतुरता - बशीर र तिनका भाइहरूले पाएको चरित्रको विशेषताबाट - अमोर एक राम्रो काम गर्ने व्यापारी भयो। जे होस्, धेरै गम्भिर, ऊ आफ्नो परिवारलाई ठूलो फ्रुगलिटीमा बस्न छोड्छ।
दि माउफिदा टाट्टलीले बनाएको चलचित्र, दि सेसन अफ मेनलाई ध्यानमा राख्नेहरूले यो कल्पना गर्न सक्दछन् कि यस्तो परिवार कस्तो छ जसको टाउको वर्षमा एक पटक मात्र टापुमा फर्कन्छ। महबूबिनमा उसको परिवारको गाउँ, बाछिर आफ्नी आमा, बुआआ र बुहूआमाको साथ महिलाको संसारमा बस्थे। यदि सादोक, जसलाई बीबीवाइले "दोस्रो बुबा" भनेर चिनाउँदछ, उनी उपस्थित र ध्यान दिएर छन् भने, यो उनकी बहिनीसँग, पाँच वर्ष जेष्ठ छ, उनीसँग नजिकको सम्बन्ध थियो। तिनीहरू २०१ 2017 मा टेम्नाको मृत्यु नभएसम्म रहनेछन्। बशिरले उनको, एक युवती विवाहित महिला र प्रारम्भिक विधवा, साथ साथै आफ्ना बच्चाहरूको पनि हेरचाह गर्नुपरेको थियो।
फ्रान्सेली र ट्युनिसियालीहरूको बिच, छुट्टिनु कूल थियो। एक वास्तविक रंगभेद।
उपनिवेशन अन्तर्गत, जब बीबीवाई आफ्नो मेमर्समा पुन: लेखाउँदछ, केटाहरू प्राथमिक विद्यालय प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न स्कूल गए र यसरी सदस्यताबाट उम्के। १ 15 वा १round को वरपर, तिनीहरूले विवाह गरे र ग्रसर्स भए। युवा बशीर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न र स्वतन्त्र हुनको लागि यस मार्ग अनुसरण गर्न प्रलोभनमा थियो। बच्चा अन्तर्गत भावी उद्यमीलाई पहिले नै छेडियो। तर उनका बुबा र भाइहरूले उनलाई अध्ययन गर्न जारी राखे।
र यो केवल ११ बर्षको मात्र थियो, किनकि उनी स्कूलको क्यारियरमा अगाडि थिए, त्यसैले उनले जर्जलाई ट्यूनिसको लागि छाडे, जुन प्रसिद्ध सद्की कलेजको लागि प्रवेश परीक्षाको लागि। सेप्टेम्बर १ 11। In मा जब उहाँ स्कूलमा भर्ना हुनुभयो, उहाँ फ्रान्सेली र अरबी भाषामा प्रत्येक वर्ष शिक्षित सय वा सोही विद्यार्थीमध्ये एक हुनुहुन्थ्यो, जुन पछि विश्वविद्यालय वा ग्रान्डेस इकोल्समा सम्मिलित हुन तयार हुनुहुन्थ्यो।
आफ्नो संस्मरणहरूमा, बीबीवाईले दोस्रो विश्वयुद्धको पूर्वसन्धामा राजधानीको दैनिक जीवन कस्तो थियो भनेर ठूलो विवरणमा वर्णन गर्दछ। फ्रान्सेली र ट्युनिसियालीहरूको बिच, छुट्टिनु कूल थियो। एक रंगभेद जसले यसको नाम बोल्दैन। युद्ध पछि, जब विकृतिवादको हावा चल्छ, उसले यो याद राख्दछ।
यद्यपि यो त्यो समय हो जब नियो-डिस्टोर, स्वतन्त्र पार्टी जसको हबीब बुर्गुइबा एक संस्थापक थिए, गोप्यता तोडे। युवा बशीरले पार्टीको मुख्यालय, बारउगिबाको कानून कार्यालयमा स्थापित बारम्बार बर्बाद गरे। त्यस समयमा न त उनी न कलेजका साथीहरूले न त स्थापित व्यवस्थालाई खारेज गर्ने कल्पना गरेका थिए। BBY कहिल्यै कट्टरपन्थी भएको छैन। उनी तल्लो तटीय कार्यकर्ताको कामबाट सन्तुष्ट छन्, पत्रक लेख्ने र प्रतिलिपि गर्ने, फाइल वर्गीकरण गर्ने। यो रोक्छ। पार्टीका निर्देशक मोन्गी स्लिमसँग परिचित हुनुहोस्, समय-समयमा महासचिव सालाह बेन यूसुफ, उनी पहिले नै माथि पुगेका छन् ...
सदिकीमा हामी टाढाबाट युद्दको अनुसरण गर्दछौं। कसै-कसैको विश्वास छ कि हिटलरले देशलाई उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्र पार्नेछ। बुउर्गुइबाले जस्तै युवा बेन याहमाद विश्वास गर्छन् कि जर्मनले युद्ध हराउनेछन र तेनिसियालीहरु लाई तेस्रो राईकको साथ मिलाउन रुचि छैन। १ 1942 1943२ को अन्त्यमा, युद्ध माघ्रेबमा फैलियो। अपरेशन टर्चको बखत, एलाइड फौजहरू अल्जीयर्स, ओरन र कासाब्लान्कामा अवतरण गर्दछन्। ट्युनिसियामा आक्रमण गर्ने जर्मनहरूले, सदिकी कलेजका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूका अभिभावकलाई फिर्ता पठाइन्छ। ट्युनिसियालीहरूको लागि, युद्ध १ XNUMX .XNUMX मा अफ्रिकाकोर्प्सको पराजयसँगै समाप्त भयो। बुचिर र उनका साथीहरू सेप्टेम्बरमा स्कूल फर्कन्छन्।
बौर्गुइबाको देश फिर्ता संग, स्वतन्त्रता आन्दोलन फेरि बल प्राप्त गर्दछ। १ 1947 in of मा बशीरले १ 19। वर्षको उमेरमा सादिकी छोडेपछि उनी भनेका थिए, "राष्ट्रवादी, पत्र अघि बुर्गुण्डियन र उपनिवेशवाद विरोधी"। यो त्यस्तो दिमागमा थियो कि उनी पेरिसको लागि बसाई स the्गठनहरूबाट "सिक्न" गए। यो छनोट वास्तवमै उसको होइन। उनका बुबा र उसको जेठो दाइ सादोकले उनीको लागि निर्णय गरे: "बाछिरले एचईसीलाई एकीकृत गर्ने छ र ब्यापारमा राम्रो काम गर्ने कुनै पनि राम्रो जर्जियन, वा - किन होइन - बैंकर हो। पछि के देखिन्छ कि तिनीहरू दुबै सही र गलत थिए भनेर देखाउँदछ। हुनसक्छ, त्यस समयमा त्यो जवान शल्य चिकित्सक बन्ने सपना देखे पनि उनलाई फ्रान्समा पढ्नु उसको उमेरका ट्युनिसियालीको लागि असाधारण अवसर हो भनेर थाहा थियो।
सिनेमाको बारेमा उत्साहित
पेरिसमा उनी सबै असन्तुष्ट छैनन्, किनकि उनले शहरलाई पत्ता लगाउन धेरै देशवासीहरू भेट्टाए। ल्याटिन क्वार्टरको रूब डेस इकोलेसको सस्तो होटलमा बसे पछि उनी रूबे लेजेन्ड्रेमा रहेको आफ्नो तयारी स्कूलबाट धेरै टाढा बसे। पाठ्यक्रम उहाँलाई धेरै चासो छैन। उसले सिनेमामा आफ्ना दिनहरू बिताउँछ। भाग्यले उनीमाथि हाँसो पुर्‍यायोः एचईसीको प्रवेश परीक्षाको क्रममा, सामान्य संस्कृतिको विषय, जुन उच्च गुणांक हो, ठीक ठिकै सिनेमा हो।
फ्रान्सेलीसँग यसको सम्बन्ध को रूप मा, तिनीहरू थोरै कम छन्। उत्तर अफ्रिकीहरू एक आपसमा बस्छन् र ११ 115 मा नियमित भेट्छन्, बोउलभर्ड सेन्ट मिशेल, उत्तर अफ्रिकी मुस्लिम छात्र संघको मुख्यालय। बीबीवाईले मेहदी बेन बार्का, अबदेराहिम बोआबिड, एम'हेमेद याजिद र अन्य धेरै भविष्यका प्रमुख खेलाडीहरू डिकोलिनेसनमा भेट गर्दछन्। फ्रान्सले उपनिवेशवादी व्यक्तिको दावीमा अधिकार दिन अस्वीकार गर्‍यो। टुनिसियालीहरूलाई जो बारडो सन्धिले ग्यारेन्टी गरेको छ त्यस्तै आन्तरिक स्वायत्तता फिर्ताको माग गर्दछ, यसले बढ्दो दमनको साथ प्रतिक्रिया गर्दछ।
डिसेम्बर,, १61952२ मा, बशीर बेन याहमदको भाग्य परिवर्तन भयो। एचईसीबाट स्नातक गरेपछि उनी फ्रान्सेली र इटालियन बैंकले दक्षिण अमेरिकाको लागि भर्ती भए जसलाई सुदामेरिस भनेर चिनिन्छ, र भेनिस नजिकै भेसेन्जा पठाइयो, इटालियन र वित्तको पाठ सिक्न। त्यो साँझ, ले मोन्डे खोल्ने क्रममा, जुन उनी एक कट्टर पाठक थिए, उसले यो कुरा सिक्यो कि एक दिन अघि युनियन नेता फरहात हेचलाई रेड ह्यान्डका सदस्यहरूले मारेका थिए, एक ट्युनिसियाली अल्जेरियन ओएएसको पूर्वचित्रण गर्दै।
के मसँग स्वतन्त्रताको लागि मेरो देशको संघर्षबाट भाग्ने अधिकार छ? "
BBY ले तुरुन्त आफ्नो राजीनामा पत्र सुदामेरिसको पेरिसको प्रबन्धमा पठाउँदछ। “के मसँग स्वतन्त्रताको लागि मेरो देशको संघर्षबाट उम्कने अधिकार छ? »उसले आफ्नो संस्मरणहरूमा नोट गर्दछ। भोलिपल्ट बिहान, उहाँ पेरिसको लागि पहिलो रेलमा चढ्नुभयो। त्यहाँ उनले फ्रान्सको नियो-डिस्टोरको राजनैतिक ब्यूरोका प्रतिनिधि मोहम्मद मस्मुदीलाई सम्पर्क गरे र उनको सहयोग प्रस्ताव गरे। सेवाहरूको प्रस्ताव सबै अधिक स्वीकार्य रूपमा यो स्वैच्छिक हो। मासमुदी बौरगुइबासँग सम्बन्धको जिम्मामा छन्, जसलाई फ्रान्सेलीहरूले ला टुन्सियाको उत्तरमा रहेको एक द्वीपसमूह ला गालाइटमा पूर्ण रूपमा अलग्गै राखेका थिए।
दीन बीन फूको मोड
वर्ष १ 1953 .1954 उनको राजनीतिक प्रशिक्षुताको हुनेछ। Bourguiba संग नियमित सम्पर्क मा, कम्तिमा चिठी द्वारा, जवान मानिस एक राम्रो स्कूल मा। उनले फ्रान्समा उनको पार्टीको गतिविधिको नियो-डिस्टोरका नेतालाई सूचित गरे र उनको निर्देशन प्राप्त गरे। एक दिन, मसुमदीले पुस्तक बनाउनको लागि उनलाई बौर्गुइबाका पत्रहरू संकलन गर्न अनुरोध गरे। एकदम राम्रो डिजाइन गरिएको पुस्तक १ XNUMX XNUMX को सुरुमा जुलियार्डले सुरु गरेको थियो ... शेलहरूले भरिएको थियो जसले बाउरगुइबालाई अत्यन्तै चिन्तित तुल्यायो।
BBY यद्यपि प्रकाशन मा खुट्टा सेट छ। उनी पत्रकारितामा पनि परिचित थिए: पेरिसबाट उनले पेटिस मतिनलाई लेख पठाए, जो ट्युनिसियाका तीन फ्रान्सेली दैनिकहरू मध्ये एक हुन्। अचम्म मान्नुपर्‍यो, तिनीहरू पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको छ, छनौट गरिएको छ भने उनले छनौट गरेका थिएः आर्थर जेफ।
मे १ 1954 .XNUMX मा Dien Bien Phu को युद्ध, एक नयाँ प्रमुख मोड़ मा चिह्नित। पहिलो पटक, औपनिवेशिक शक्तिलाई सैन्य रूपमा "guenillards" को सेनाले पराजित गरेको छ। महत्वपूर्ण छ रूपमा यो घटना, Bourguiba को रणनीति परिवर्तन गर्दैन जो, यसै बीचमा, ब्रिट्नी मा ग्रिक्स टापुमा सारिएको छ। उसको लागि युद्ध दबाबको दोस्रो माध्यम बनेको छ, जसले राजनीतिक कारबाहीलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन।
राजनीतिक जीवनको असुरक्षाको बाबजुद, बौर्गुइबाले उनलाई छोरो जस्तो व्यवहार गर्न छोड्दैन
बीबीवाईले अन्तत: जून १ BB 1954Y मा आफ्नो चिनारी बनायो। यो पहिलो बैठकदेखि उनीहरूको अन्तिम सम्पर्क सम्म, १ 1973। In मा - र राजनीतिक जीवनको अव्यवस्थितिको बावजुद - बौर्गुइबाले उनीसँग छोराको साथ व्यवहार गर्न छोड्ने थिएनन्। उसको जैविक छोरा, हबीब जुनियर भन्दा राम्रो छ, जसको दुविधाले उनलाई भयभित पार्छ। "सुप्रीम फाइटर" गम्भीरता, स्पष्टता, बशिर बेन Yahmed को राम्रोसँग गरेको कामको स्वादको सराहना गर्दछ। यो, आफ्नो जीवनको अन्तिम सम्म, केवल हरी मसीमा लेख्नेछ, र color्ग जुन बुउर्गुइबाले आफ्नो छाप बनायो र जुन बदलेमा उनले स्वीकार गरे, नक्कल गरेर।
फ्रान्स र ट्युनिसियाबीचको सम्बन्धले फ्रान्सेली सरकारको प्रमुखमा पिरेमेन्ड्स फ्रान्सको आगमनले नयाँ मोड लिन्छ। जुन १ 1954 ?1881 मा काउन्सिलका अध्यक्षले मसमुदी र बेन याहमेदलाई बुउर्गुइबालाई मूल प्रस्ताव पठाउन निर्देशन दिए: के नियो-डिस्टोर अल्पसंख्यक सरकारको सरकारमा भाग लिन सहमत हुनेछन्? बौरगुइबा सहमत भए, यसरी १ XNUMX१ पछि पहिलो पूर्ण ट्युनिसियाली सरकार तहर बेन अम्मारको नेतृत्वमा गठनको लागि मार्ग प्रशस्त।
स्वायत्तता देखि स्वतन्त्रता सम्म
त्यसको लगत्तै बौरगुइबा पेरिसको १२० किलोमिटर दक्षिणमा अमिलिमा सारियो। बीबीवायलाई एक नयाँ मिसनको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ: नियो-डिस्टोरको शेफको हेरचाह गर्न र यस शहरबाट पेरिसमा उसलाई साथ दिन। पक्कै पनि, उनीसँग एउटा कार थियो भन्ने कुरा, त्यस समयमा एक दुर्लभ विशेषाधिकार थियो - एक प्यूजोट २०120 उसको भाइ ब्राहिमले प्रस्ताव गरेको थियो - गणना गरिएको छ। तर सबै भन्दा बढि, उहाँ बौरगुइबाको आत्मविश्वास र स्नेह जित्न सक्षम हुनुहुन्थ्यो।
L'Action को पहिलो अंक को सामने कभर: ला कन्फरेन्स डे बांडु।
आन्तरिक स्वायत्ततामा द्रुत गतिमा वार्ताको तयारी, मसमुदीले बेन याहमदलाई, त्यसपछि विज्ञान-पोको अन्तिम वर्षमा उनको प्रमुख स्टाफ र ट्युनिसियन प्रतिनिधिमण्डलको प्रवक्ता हुन आग्रह गरे। आन्तरिक स्वायत्तता ड्र्यागको बारेमा छलफल। मार्च १ 1955 XNUMX मा बीबीवाइले ट्युनिस फर्कने आफ्नो कामबाट राजीनामा गरे। उनको मनमा एउटा परियोजना थियो: एउटा अखबारको निर्माण। उनको लागि, ट्युनिसियालाई मिडियाको आवश्यकता छ जसले जनसंख्यालाई नियो-डिस्टोरको राजनीतिक विकल्पहरूको पक्षमा परिचालन गर्दछ। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि ले मोन्डे जस्तो एक बिट: यसलाई अधीनमा नगरी सत्ताको नजिक।
युवा अफ्रीका अभिलेखहरू
यो हुनेछ कार्य जुन धेरैले सोच्दछन् त्यसको विपरित हो न त बौर्गुइबाको अखबार हो न उनको पार्टीको, बरु बशिर बेन याहमदको। उनका भाइहरू, उनलाई फेरि एकपटक मद्दत गर्छन्, बाँकी काम गर्छन्। ट्यूनिसको केन्द्रमा रहेको rue d'Al-Jazeera मा कार्यालयहरू भाडामा लिदै उनी पहिलो अंकको तयारीमा काम गरिरहेका छन्। एउटाको बिषय, उहाँसँग पहिले नै यो दिमागमा छ: यस वर्ष १ 1955 .XNUMX मा एक महान अन्तर्राष्ट्रिय घटना घट्दैछ बन्डु conference सम्मेलन, जुन अप्रिल १ April मा इन्डोनेसियामा खुल्ने छ, देशहरूको दृश्यमा प्रविष्टि चिह्नित गर्नुपर्दछ के तेस्रो विश्व भनिन्छ। तर, अप्रिल on० मा, ट्युनिसियाको लागि आन्तरिक स्वायत्ततामा सम्झौताहरूको पेरिसमा हस्ताक्षर भएको खबर छ। कभरमा देखा पर्ने नेहरूका लागि निकै नराम्रो: उनको अन्तिम क्षणमा बोर्गुइबाले प्रतिस्थापन गरे।
पछिल्लो अनुरोधमा बेन याहमद उनीसँग अल्जियर्स शहरमा पार गर्न फ्रान्स फर्किए जहाँबाट राष्ट्रवादी नेता जून १, १ 1 1955 मा ला गाउलेटमा विजयी हुँदै अवतरण गर्ने थिए। एक वर्ष भन्दा पनि कम समयमा, ट्युनिसिया आन्तरिक स्वायत्तताबाट स्वतन्त्रतामा लाग्यो मार्च २०, १ 20 1956 on मा उद्घोषक। बाचिर बेन याहमद प्रिन्टि press प्रेसमा छन्, जहाँ उनले धेरै संख्यामा "बन्द" गरे। कार्यएन, जब "सी लाहबीब" [बउरगुइबा] ले सरकारको सीट कसबामा सबै व्यवसाय बन्द भएको बताउँदछ। त्यहाँ, उनले उनलाई सूचना मन्त्री नियुक्त गर्ने घोषणा गरे। जे होस् बीबीवाईले यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न खोज्यो, ऊ आफैंलाई २ 28 वर्षको उमेरमा स्वतन्त्र ट्युनिसियाको पहिलो सरकारको सदस्य भेट्छ।
उसको हिचकिचाहटले उनलाई आफ्नो कामलाई गम्भीरताका साथ लिनबाट रोक्दैन। "मैले यी १teen महिनामा जति काम गरेको छैन", उनले भने। यसको उपलब्धिहरु मध्ये, एक सिनेमा विभाग को निर्माण, पहिलो फिल्म समाचार को शुरूवात, एक पत्रकारिता स्कूल को खोलन।
चाँडै नै पर्याप्त, तथापि, उनी यस भूमिकामा असहज महसुस गरे। मन्त्रीहरु महत्वपूर्ण निर्णयहरु संग सम्बन्धित छैनन्, प्रोटोकल उहाँ बाट तौल। यसका साथै उनी अन्य मन्त्रीहरूको दुश्मनीको कुरा पनि हुन् जसले हबीब बुर्गुइबासँगको उनको करीवताको कदर गर्दैनन्।
ऊ व्यापारमा जान्छ। र, यस अवसर मा भेट हुनेछ ... चे Guevara!
जे होस्, यो सेप्टेम्बर १ 1957 1970 मा उनको राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने यो व्यक्तिगत मामला थियो। एक भाषणमा, राज्यप्रमुखले आफ्ना भाइहरुलाई अप्रत्यक्ष तर धेरै अपमानजनक संकेत गरे जसले ट्युनिसियाको वन क्षेत्रको केन्द्रमा किनिए र उनीहरुलाई कृषिमा रूपान्तरण गरे। भूमि, देशको वन फँडानीमा योगदान गरेको आरोप छ। Bourguiba उसलाई आफ्नो निर्णय उल्टो बनाउन को लागी कोशिश गर्दछ। खेर। ती दुई व्यक्ति राम्रा शर्तमा रहे, बेन याहमदले १ XNUMX .० को दशकको सुरुसम्म ट्युनिसियाका राष्ट्रपतिका लागि भाषण लेखेका थिए।
आफ्नो स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त गरिसकेपछि, BBY तसर्थ आफूलाई पूर्ण समर्पित गर्न सक्दछ कार्य। मार्च १ 1958 1956 मा, मार्च १ XNUMX .XNUMX मा ट्युनिसियाको स्वतन्त्रताको लागि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका व्यक्ति ताहर बेन अम्मारको अभियोग र गिरफ्तारीबाट आक्रोशित उनले "खराब झगडा" भन्ने लेख लेखे र प्रकाशित गरे। उग्र, Bourguiba सबै शेयरधारकहरु बाट फिर्ता मागेको मांग गर्दछ कार्य। मुटुमा मृत्यु, BBY अखबारमा घुसाउने समाधान गर्दछ।
अर्को दुई बर्षसम्म उनले उत्साहका साथ प्रयास गरे तर सफलताको साथ व्यापार गर्नका लागि अर्थव्यवस्थाको "ट्युनिसिफिकेशन" को वातावरणले यसलाई सहयोग पुर्‍यायो जसले केहीलाई छोटो समयमै धेरै धनी बनायो। यसको मुख्य उपलब्धिहरूमध्ये: अफ्रिकाको निर्माण, ट्यूनिसको बीचमा लक्जरी होटेल। नेदरल्याण्डको साथ, उनले सोत्राबात नामक निर्माण कम्पनीको निर्माण गरे जसले धेरै ठूला सम्झौताहरू जित्यो, जस्तै एल-ओइना एयरपोर्टको रनवे र कासारिनमा एस्पर्टो प्रशोधन केन्द्र। उनले पहिलो राष्ट्रिय बैंक एसटीबी (ट्युनिसियन बैंक कम्पनी) को निर्माणमा पनि भाग लिए।
चिनी बजारमा उसको आँखामा बढी चाखलाग्दो चीज हुनेछ। टेन्डरका लागि कल जित्दा, अप्रिल १ 1960 .० मा उनी क्युवा गए, क्रान्तिकारीले फिडेल क्यास्त्रोलाई सत्तामा ल्याएको केहि महिना पछि। त्यहाँ क्युवाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अर्नेस्टो चे गुवारासँगै उनले 40०,००० टन चिनी आपूर्ति गर्ने कुराकानी गरे।
यद्यपि पत्रकारिताको भाइरसले उनलाई छोडेको छैन। अक्टोबर १ 17, १ 1960 XNUMX०, बेपत्ता भएको दुई बर्ष पछि कार्य, उनले मोहमद बेन स्मारल, जो पहिले नै आफ्नो सम्पादक प्रमुख थिए सहित, केहि साथीहरूसँग शुरू गरे। अफ्रीका कार्य, ट्युनिसिया सरकारबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र एक ठूलो भौगोलिक क्षेत्र कभर एक अखबार। उक्त पत्रिकाले स्वतन्त्रताको लागि अफ्रिकी र अरब जनताको स on्घर्षमा ध्यान केन्द्रित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अल्जेरियामा भइरहेको मुक्तिको युद्धले त्यहाँ ठूलो ठाउँ ओगटेको छ। यस अवधिमा बीबीवाईले उप-सहारा अफ्रिका पत्ता लगायो, घानाको यात्राको क्रममा उनले क्वामे एनक्रुमाह र कंगोमा भेट्टाए जहाँ उनी प्याट्रिस लुमुम्बासँग मित्रता गाँसे। चालमा पान अफ्रिकीवाद नयाँ साप्ताहिकको साझा थ्रेड मध्ये एक हुनेछ।
उसको घर सबै क्रान्तिकारी लडाकुहरु, विशेष गरी अल्जेरियाको मुख्यालय बन्छ
जसरी उसले आफ्नो क्यारियर भर गर्दछ, BBY आफूलाई प्रतिभाशाली सहयोगीहरु संग घेरिन्छ। मोडलमा रॉबर्ट नामिया, लेखकको रूपमा फ्रान्सेइस पोली ती हुन्। फ्रान्ट्ज फ्यानन, काटेब याकिन र अन्य धेरै कलमहरूले पाठहरू प्रदान गर्दछ। गमर्थमा उनको स्नातक घर सबै क्रान्तिकारी लडाकुहरु, विशेष गरी अल्जेरियनहरु र विदेशी पत्रकारहरुको मुख्यालय बनेको छ। धेरै छिटो, उनी ट्युनिस बाहिर उपस्थित हुन चाहन्थे। उनले जीन डानियल द्वारा संचालित फाउबर्ग सेन्ट होनोरिसमा पेरिसमा एउटा कार्यालय खोले। रोबर्ट ब्याराट र पल-मैरी डी ला गोरस उनको उत्तराधिकारी हुनेछन्।
Jeune Afrique को जन्म
अक्टुबर,, १7.१ मा बेन याहमादले "व्यक्तिगत शक्ति" मा सम्पादकीय लेखे जसले बोर्गुइबालाई रीस उठायो। पत्रिका प्रतिबन्धित छैन, तर "सर्वोच्च सेनानी" ले यो थाहा पाउँदछ कि ऊ आफैंलाई शीर्षकको मालिक मान्दछ " कार्य "। साप्ताहिकले तुरुन्त यसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्दछ। अचम्मित, BBY अप्ट, धेरै विश्वास बिना, उसले पछि भन्नेछ, "Jeune Afrique" को लागी। एक नाम प्रख्यात हुनेछ र अन्तमा Béchir बेन Yahmed संग भ्रमित हुनेछ।
१ 1962 XNUMX२ मा अल्जेरियन युद्धको अन्त भयो। बीबीवाई विश्वास गर्दछ कि ट्यूनिसले आफ्नो रणनीतिक चासो हराउनेछ। इटालियन बोल्दै र इटाली जाने, जसको प्रिन्टरहरूसँग राम्रो प्रतिष्ठा छ, उसले स्थानान्तरण गर्न छनौट गर्दछ Jeune Afrique रोममा। तर, धेरै छिटो, ऊ र उसको सानो टिमलाई - करीव १० व्यक्तिले एक्लो महसुस गरे। तिनीहरू केवल अफ्रिका र टुनिस र पेरिसमा अफिस मार्फत बाँकी विश्वसँग जोडिएका छन्।
जेएले अफ्रिकी समाचार, तर भियतनाम युद्ध र अरब-इजरायली द्वन्द्वलाई पनि समेट्छ
सेप्टेम्बर १ 1964 .XNUMX मा फ्रान्सेली गृह मन्त्री एलान पेरेफिटले प्रतिबन्ध हटाएपछि Jeune Afrique, BBY ले डुबकी लिन्छ। उनले सम्पादकीय स्टाफ पेरिसमा सारिदिए। एक निर्णायक कदम १venue औं arrondissement मा, १ th in1965 मा एवेन्यू डेस टेर्नेसको परिसर खरीद हुनेछ। Jeune Afrique त्यहाँ एक चौथाई शताब्दीको लागि रहनेछ र महिमाको घण्टा त्यहाँ बस्ने छ। जर्जस हेनेन, गाय सिटबोन, इब्राहिमा सिग्नाटी, र अफिस बेन येडरको खाता व्यवस्थापनका लागि बनेको टोलीले १ 1968 fromXNUMX देखि जीन-लुइस गौराडलाई जोडेको छ। रोमबाट आउँदा एल्डो डे सिल्भा दोस्रो जीन लोवी, एक धेरै राम्रो कलात्मक निर्देशक, जसले मोडेल पूर्ण रूपमा नवीकरण गर्दछ।
भिआरा, सेन्नेन, सिराडियो डियालो, हामिद बरडा, अमीन मालाउफ ...
चाँडै नै र cover्ग कभर प्रदान गरिने छ, साप्ताहिक अफ्रिकी मुद्दाहरूमा केन्द्रित पहिलो फ्रान्सेली-भाषी प्रकाशनको रूपमा स्थापित भयो। तथापि, भियतनाम युद्ध र अरब-इजरायली द्वन्द्व जस्ता महाद्वीप बाहिरका विषयहरू उहाँ बिर्सनुहुन्न। बीबीवाईसँग प्रतिभाशाली पत्रकारहरू भेट्ने कला छ र यसका कर्मचारीहरूलाई तालिम दिन प्रयास गर्दछ। आधा शताब्दीका लागि, Jeune Afrique, उनको नियम अन्तर्गत, एक नर्सरी हुनेछ जहाँबाट पत्रकारहरू देखा पर्नेछन् जसले धेरै जसो अन्य पत्रिकाहरू, विशेष गरी पेरिसवासीहरूका राम्रा दिनहरू बनाउँदछन्।
डेनियल संग भेट
BBY सजिलो मालिक होइन, यद्यपि, र सम्पादकहरूको वाल्ट्जले सम्पूर्ण पेशालाई चुक्ल बनाउँदछ। जे.ए.को इतिहासलाई चिह्नित गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये, पाल् बेर्नेतेल (पश्चिम भारतीय र क्यामेरोनियन मूलका), बेनिनी जस्टिन भिएरा, मालागासी सेन्नेन एन्ड्रियामारोडो, गुयना सिराडियो डियालो, मोरक्कन हामिद बराडा, लेबनानी अमीन मालाउफ (गोन्कोर्ट पुरस्कार) १ 1993 XNUMX)), साथसाथै राष्ट्रपति सेgh्गोरको नजिकका फिलिप गेलरार्ड पनि थिए। ती सबैले अखबारको सफलतामा योगदान पुर्‍याए, यद्यपि कसैलाई एकै पलिन पनि शंका लागेन कि यसले बीबीवाईको सतर्क नियन्त्रणमा काम गरिरहेको थियो।
हामी डेनियल, उनकी पत्नी र उनको मुख्य सहयोगीको भूमिकालाई वेवास्ता गर्न सक्दैनौं। तिनीहरूले नोभेम्बर १ 1968 .29 मा ट्यूनिसमा भेटे। उनी २ years बर्षकी थिइन्, र उनका पति, अर्थशास्त्री मोहसेन लिमम, जसले ट्युनिसियाका अर्थमन्त्रीको क्याबिनेटमा काम गर्थे, एक विमान दुर्घटनामा मारिए र उनको3बर्षे छोरा, जायादको साथमा गए। उनीहरूले पाँच बर्ष पछि विवाह गरे, र उनीहरूको मिलनबाट आमिर र मारवने जन्मे।
१ 1976 1994 देखि १ XNUMX XNUMX From सम्म, Jeune Afrique यसको सबैभन्दा समृद्ध अवधिको अनुभव भयो
अब पेरिसियन, साप्ताहिक विकास गर्न जारी छ, धेरै सफलताहरु द्वारा चिह्नित तर पनि गम्भीर स .्कट द्वारा। सन् १ 1971 XNUMX१ मा, हड्ताल यो गुमाउने क्रममा थियो। बरामदगी, सेन्सरशिप र प्रतिबन्धको बीचमा, अफ्रिकी अधिकारीहरूले कुनै आलोचना प्रतिरोध गर्ने प्रतिरोध गर्ने बारम्बार यसको प्रसारमा बाधा आएको छ। आन्तरिक रूपमा, केहि मुद्दाहरू वा केहि देशहरू जस्तै हफुटको आइभरी कोस्ट वा सांकाराको बुर्किना फासोमा, फरक दृष्टिकोण राखिन्छ। पश्चिमी सहारा वा खाडी युद्धहरू जस्ता केही विषयमा, मालिकले हस्तक्षेप गर्छन्, र उर्जा संग, उनको धारणा सही छ कि लाईन थोपाउन।
१ 1976 1994 देखि १ 150 XNUMX From सम्म, JA ले यसको सबैभन्दा समृद्ध अवधिको अनुभव गर्यो। एक विजेता कम्पनी, यो लगभग १ people० व्यक्ति रोजगार। साप्ताहिक सफलताको आधारमा, BBY ले यसको सिर्जनाहरू गुणा गर्दैछ। अफ्रीका म्यागजिन, युवा अफ्रीका अर्थव्यवस्था, गोपनीय टेलेक्स (एक दैनिक गोप्य सूचना पत्र), संस्करण du जगुआर (पर्यटक गाईडहरू) जन्म लिन्छन्। समयको हिचकी मध्ये, बिक्री, १ 1990 XNUMX ० को, को युवा अफ्रीका अर्थव्यवस्था ब्लाइज पास्कल टल्लालाई, JA बिक्री प्रतिनिधि। बेन याहमादको गल्ती, किनकि उनी अरू सबै जस्ता थिए, पत्रिका बेच्नु थियो शीर्षकको परिवर्तन बिना। विवाद लामो कानुनी लडाईमा समाप्त हुन्छ।
कुरालाई अझ नराम्रो बनाउनको लागि, बीबीवाईले ट्राभल एजेन्सी, टीएमभी किन्दै अर्को लापरवाही गरेको छ, जसको नतिजा विनाशकारी साबित भइरहेको छ। Jeune Afrique पहिले नै ठूलो समस्या थियो जब 1994 मा CFA फ्रैंक को अवमूल्यन भयो। रातारात, अखबारले आफ्नो आम्दानीको आधा हिस्सा गुमाउँछ। बशिर बेन याहमद स्वीकार्छु, “सीएफए फ्र्यांकको अवमूल्यन हुने कुरामा मैले धेरै समय अघि नै एउटा प्रस्तुतिकरण गरें, तर मैले पर्याप्त सावधानी अपनाइन। म intoण मा लाग्न जारी। मैले सबै बेचे। हामीले भाँडा र तलब पनि तिर्न सकेनौं। को बिक्री Jeune Afrique "१ 150०,००० प्रतिहरू भन्दा ,000०,००० भन्दा कममा पुगेको थियो"।
अब्दु दिउफ, उमर बोंगो ओन्डिम्बा र फ्रान्सेइस मिटर्रान्डको सहयोग
वाणिज्य अदालतले सतर्कता प्रक्रियाको संख्या बढाइरहेको छ, BBY लाई कानुनी निवारण स्वीकार्न प्रोत्साहित गर्ने। वा एक असाइनमेन्ट पनि। त्यहाँ टेकओभर अफरहरूको कुनै कमी छैन: एल्फ, हभस, भिन्सेन्ट बोलोरी ... BBY ले तिनीहरूलाई विचारमा लिन अस्वीकार गर्दछ। अर्कोतर्फ, उनले सेनेगाली अब्दु दीउफ, ट्युनिसियन जिने अल-अबिडिन बेन अली, गबोनिस ओमर बोंगो ओन्डिम्बा वा मॉरिटानियन माउउया ओउलड जस्ता विभिन्न राष्ट्रका नेताहरूबाट उनले प्राप्त गरेको सहायता लुकाउँदैनन्। टाया, फ्रान्सेली राष्ट्रपति फ्रान्सियोस मिटरान्ड बिर्सनु हुँदैन। सबै साथी थिएनन्, यो टाढा बाट। सात बर्षको संघर्ष पछि, Jeune Afrique अन्तत: स्टाफको तीन क्वार्टर खारेज नगरी अर्ध-सन्तुलन भेटियो। जगुआर गाईड्सको संस्करण लिन्छ।
२०००-२००१ देखि समूह फेरि ध्वनि आधारमा सुरू भयो। शुभ समाचार जोडिएको छ, जस्तै प्रतिबन्धको एक शताब्दी पछि अल्जेरियाको बजार को पुनः खोल्न। "प्लस" भन्ने सम्पादकीय फाइलहरू सफल भएको प्रमाणित भयो र राजस्वको मुख्य स्रोतहरू मध्ये एक बन्न गयो।
उनको अफसोस: मण्डेला वा डेंग जिओपिंगलाई थाहा छैन
यो कठिन अवधिबाट, तर आफ्नो क्यारियर भर, बशीर बेन Yahmed निश्चित विश्वास प्राप्त गरेको छ। सब भन्दा बलियो भनेको एक मुठ्ठी संकल्पित व्यक्तिहरू ईतिहासको ज्वलन्त मोडिनका लागि पर्याप्त छन्। निस्सन्देह केहि मोडेललाई संकेत गर्न उसको प्रवृत्तिलाई बयान गर्ने कुनै विचार, जुन उसले कहिलेकाँही उद्धरणहरू पनि बनाएर कोरिडोर र बैठक कोठामा झुण्ड्याएको थियो। Jeune Afrique। “दुर्भाग्यवश, मलाई चार्ल्स डी गउले र नेल्सन मण्डेलासँग हात मिलाउने सम्मान कहिले पनि भएन, उनी दु: खित थिए। मलाई सिंगापुरको यो चमत्कार राज्यका संस्थापक ली कुआन येउ र चीनको पुनर्जन्मका प्रमुख खेलाडी डे X सियाओपिंगलाई पनि जान्न मन लागेको थियो। "
यदि उसले यी पात्रहरू छुटायो भने, उसले धेरै अरूसँग काँधमा द .्यो। नासेर, हो ची मिन्ह (हनोईमा), मोबुटु (किंशासामा) ... वर्षौंदेखि, रूब डे वरनेको उनको घर प्रतिष्ठित ठेगाना भएको छ, एक मूल्यवान "सैलून", जहाँ उनले डेनियलसँग, फ्रान्सेली नेताहरू र बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई पनि ग्रहण गर्दछन्। जस्तै लियोपोल्ड सदार सेन्घोर वा मोहम्मद मजाली, ट्युनिसियाका प्रधानमन्त्री। प्यालेस्टाइन नेता इसम सर्तावी वरिष्ठ इजरायली अधिकारीहरूसँग गोप्य रूपमा कुराकानी गर्न आएका छन्। विश्व यहूदी कांग्रेसका संस्थापक नहुम गोल्डम्यान, मोरक्कन अबदेराहिम बोआबिड, अल्जेरियाई चेरिफ बेलकासिम, इतिहासकार चार्ल्स-एन्ड्री जुलियन वा जीन डानियल, आफ्नो घनिष्ठ मित्र र Nouvel निरीक्षक को संस्थापक, प्रायः खाजा वा बेलुकाको खानाको लागि।
संकारा र Lumumba तारा शूटिंग थिए ...
अन्य व्यक्तित्वहरु, अन्य परिस्थितिहरुमा भेटिएका, उनीहरुका निजी pantheon मा देखा पर्दछ: थॉमस Sankara, फेरहट हेचेड, पैट्रिस Lumumba र चे Guevara। क्रान्तिकारीहरू जसद्वारा उनी "छलकपट" भएको कुरा स्वीकार गर्दै उनीहरूका छनौटहरूको बारेमा सोच्दै थिए: "मैले पक्कै पनि उनीहरू जस्तो व्यवहार गर्ने थिइनँ तर उनीहरूले त्यस्तो चीज गरे जुन मलाई गर्ने छैन, चीजहरू जुन सुन्दर, विश्लेषण गरिएका छन्। भावना को स्पर्श, पुरानो पनि। यो लगभग राजनीतिक सौंदर्यशास्त्र थियो, यो राजनीतिमा एकदम राम्रो थियो जुन यथार्थवाद र शक्ति सन्तुलनमा आधारित छ। सांकरा वा लुमुम्बाले तारा चलाउँदै थिए, तिनीहरू राज्य प्रमुख बन्नका लागि बनेका थिएनन्। "
Ouattara, आफ्नो आजीवन मित्र
राज्य प्रमुखहरू, अवश्य पनि उनी धेरै जसो आएका थिए। दुई ट्युनिसियाका राष्ट्रपति हबीब बउरगुइबा र जीन अल-अबिदिन बेन अली, यी त कुनै पनि सम्बन्ध लामो शान्त नदी थिएनन् भने पनि सबैभन्दा नजिकका हुन्। तर सबैभन्दा प्रिय र सबैभन्दा वफादार मित्र निस्सन्देह Ivorian Alassane Ouattara हो। बीबीवाईले आफ्नो पहिलो भेटलाई सम्झेको थियो, जो पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको केन्द्रीय बैंकमा मिसनको जिम्मेवार थिए। उक्त पत्रकार आफूलाई "एक प्रकारको जेठो भाई" मान्थे र साझा बिन्दुलाई जोड दिन मन पराउँछन् जसले उनलाई उसको साथीलाई एकजुट गराउँदछ, उनीजस्तै "एक सेतो" लाई विवाह गर्दछ र जसमा उसले "पहिलो नजरमा" एक जना मान्छेको कद पत्ता लगाएको आश्वासन दिन्छ। "राज्य प्रमुख"। उनले "बादलबिनाको मैत्री" लाई मन पराउँदा खुशी भयो कि एडीओको शक्तिमा सामेल नभए पनि कुनै चीज विचलित भएन: "प्रजातान्त्रिक र व्यवहार गर्ने अफ्रिकी राजनीतिज्ञ उनी हुन्। उसले कहिले पनि मेरो बारेमा हल्का अवलोकन गरेन Jeune Afrique, उहाँ असहमत भए पनि। "
मिट्टरान्डले शाब्दिक जालहरू मेरो वरिपरि छोडेका थिए, मलाई आकर्षण गर्नका लागि
एक आरक्षण जसले बीबीवाई को सडक पार गर्ने सबै अफ्रिकी नेताहरूलाई प्रदर्शन गर्दैन। हफौट, अब्दु दीउफ, बेन अली, उमर बोंगो ओन्डिम्बा वा अब्दुलाई वेडेसँग सम्बन्धहरू सँधै सजिलो हुँदैनन्। बोकासा, Hissène Habré, Idriss Dobby or Kadhafi - जसका महान पान अफ्रिकी भाषणहरू BBY लाई "होक" को रूपमा वर्णन गरिएको छ - तिनीहरू अवस्थित थिएनन्। उनले फ्रान्सेली राष्ट्रपतिहरूसँग पनि भेट गरे: गिस्कार्ड, चिसो र टाढा, उनले बेकम्मा छोडिदिए जबकि जैक चिराकले उनलाई हल्कासित, कुनै स्नेहमा राख्न प्रेरित गरे। फ्रान्सियोइस होलान्डेबाट निराश भएर उनी इमान्वेल म्याक्रोनलाई यति धेरै जवान र रुचि देखिन्थे कि कहिलेकाँही उनलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ।
ब्रुनो लेवी, JA का लागि
त्यहाँ फ्रान्सेइस मिटर्राण्ड रहे, जसलाई बीबीवाईले आफू एक साँचो मित्र हो भनेर अस्वीकार गर्‍यो तर जससँग उसले सम्बन्ध कायम राख्यो उसको दुई सर्तहरू पछ्यायो। पाँचौं गणतन्त्रका प्रथम समाजवादी राष्ट्रपतिले १ 1981 XNUMX१ मा ज्युन अफ्रिकको समर्थन जित्ने प्रयास गरेका थिए। “उनले मलाई जालमा पार्न शाब्दिक जालहरू ममा हालेका थिए। मैले साइकललाई आंगनमा राखे पछि टाईको एलेसीमा उनलाई भेट्न जान्थें, ”बाचिर बेन याहमेदले सम्झे।
फ्रान्सेली समाजवादको अर्को व्यक्तित्व मिशेल रोकार्ड अर्को तर्फ एक साँचो मित्र थियो, लिंकको अन्त्य भए पनि। को संस्थापक Jeune Afrique कुनै कठिनाई बिना नै यसलाई स्वीकार्नुहोस्: यो हार्ट स्ट्रोक र क्रमिक फुटेर कार्य गर्दछ, "प्रतीकात्मक वा माध्यमिक कारणको लागि" तोड्न सक्षम। यो नियो-डिस्टोरका पूर्व नेता मोहम्मद मसमुदी, वकिल जक वर्गीस, पत्रकार गाई सिटबोन वा व्यापारी विन्सेन्ट बोलोरीको साथमा भएको थियो। "मलाई संवेदनशील भनिएको छ, तर यो मलाई भयो कि मलाई धोका दिइयो", उनले आफुलाई न्यायोचित तुल्याए जब उनले मानिसहरूलाई कता कता कता कता कता कता कता कता कता कतै आफ्नो घनिष्ठता साझा गरे। उनले यो पनि आश्वासन दिए कि एक व्यक्तिको वास्तविक मूल्य - उसले "एक मान्छे" को सट्टा - उसले आफूले गरेको काम छोडेको तरिकाबाट प्रकट भयो, चाहे यो व्यापार हो, मित्रको होस् वा प्रेमको।
उहाँको अत्यधिक ग्राफोलोगिको प्रयोगले वरपरका मानिसहरूलाई पनि चकित बनायो। उनीसँग राष्ट्रका प्रमुखहरू वा जेए विश्लेषणका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको हस्तलिखित नोटहरू थिए, उनले आफ्नी श्रीमती डेनिएलको हस्तलेखन अध्ययन गरेको कुरा औंल्याएमा रमाइलो गरे, र जब हामी आश्चर्यचकित भयौं कि कार्टेसियन दिमागले त्यस्तो अभ्यासमा भरोसा गर्न सक्दछ, उनले हाँस्दै यसो भने: “वास्तवमा म ग्राफिक विश्लेषणहरूमा मात्र विश्वास गर्दछु जब ती खराब हुन्छन्। "उनले यो पनि आश्वासन दिए कि २००ure मा गरिएको लरेन्ट ग्याग्बोले" ठूलो आकारको अहंकार, शक्तिको आवश्यकता र पागल प्रकारको व्यक्तित्व "खुलासा गर्दै अत्यन्त गहिरो हुँदै गयो।
उनी पूरै अफ्रिकामा बोल्न "महाद्वीपको लागि एउटा अखबार" बनाउन चाहन्थे
यो खुलस्तपन, यो धेरै व्यक्तिगत र आफ्नो वार्तालापहरुलाई उक्साउन को लागी उक्साउन को लागी आफ्नो दाबी को तरिका, स्वाभाविक रूपमा बशीर बेन Yahmed मात्र मित्र कमाएको थिएन। यसको ईतिहास भर, Jeune Afrique १ 1961 1978१, १ 1979 1986, १ XNUMX। and र १ XNUMX XNUMX - निश्चित गुरुत्वाकर्षणको चार - सहित धेरै आक्रमणको लक्ष्य पनि थियो। पहिलो फ्रान्सेली चरम अधिकारका कामहरू थिए, अन्तिम पक्कै पनि निश्चित थिए - यद्यपि यस मामिलामा अकाट्य प्रमाणहरू प्राप्त गर्न गाह्रो छ - कर्नल गद्दाफीको लिवियाले निर्देशित गरे, जसले साप्ताहिक रूपमा उनको विज्ञापन गर्ने हिचकिचाहटको कदर गरेन।
JA का लागि ब्रुनो लेवी
हिंसाका यी कार्यहरू देखेर स्तब्ध भए तर थोरै डराए पनि, बीबीवाईले १ 1960 in० मा आफ्रिक एक्शनको स्थापना हुँदा उनले आफैंको लागि बनाएको मार्ग अनुसरण गर्न छोडे: "महाद्वीपको लागि एउटा समाचार पत्र" बनाउने। टुनिसिया, माघ्रेबियन वा अरब मिडियाको भूमिकामा सीमित नभई सारा अफ्रिकामा बोल्न र आवाज उठाउन सहाराले लामो समयदेखि गठन गरिसकेको थियो। उनले महसुस गरे कि उनी सफल भए र यो लुकिएनन कि यो उसको "मुख्य गर्व" हो।
यी प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्न, BBY केहि कडा निश्चितताहरूमा निर्भर थियो जुन कहिलेकाँही अन्योलमा पर्दछ। विशेष गरी प्यालेस्टाइनको प्रश्नमा यो एउटा कारण हो जुन उसको मुटुको नजिक थियो तर त्यसले उसलाई इजरायलप्रति दुश्मनी प्रदर्शन गर्न उक्साउँदैन तर अरबको धारणाको राम्रो पक्षको विपरित। "मैले जर्जबाका यहूदीहरू कसरी बाँचिरहेका देखे," उनले वर्णन गरे। मैले देखें कि WWII को समयमा उनीहरूलाई के भयो, जुन घरमै महसुस गर्ने ठाउँ खोज्नुको कारण हुन पुग्यो। त्यतिखेर धेरै यहूदीहरूले हामीलाई स्वतन्त्रताको लागि स struggle्घर्षमा मद्दत गरे ... "यती धेरै अनुभवले उनलाई आफूलाई" फिलोसेमाइट "भनेर परिभाषित गरे, जबकि तेल अवीवमा सत्तामा रहेको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले अभ्यास गरेको पृथकवादी नीतिमा क्रोधित भए।
तपाइँ के चाहानुहुन्छ, मसँग पुरानो औपनिवेशिक परिसरहरू छन्, त्यो मेरो कथा हो ...
महान पश्चिमी शक्तिहरूसँगको उनको सम्बन्ध र तथाकथित "उदीयमान" देशहरूप्रतिको उनको आकर्षणले पनि उनी विश्वको पढ्ने सर्तमा परिणत भएको थियो र उनलाई थाहा थियो कहिलेकाँही अचम्मको कुरा थियो। "जब चिनियाँहरूले १ the in1964 मा उनीहरूको आणविक बम बिष्फोटन गरे, तब मैले अनुमोदनको संपादकीय लेखेको छु, गर्वका साथ," उनले २०१० मा भने, पचास बर्षको पचास वर्षको अवसरमा Jeune Afrique। पहिलो पटक, एक गैर-सेतो शक्ति लगभग आफ्नै टेक्नोलोजीद्वारा सैन्य आणविक शक्तिमा आयो। मेरा सबै फ्रान्सेली मित्रहरू - म यसलाई मेरो जीवनभर याद गर्नेछु - समाजवादी एलेन स्यावरी सहित, मलाई भन्यो: "बशीर, तिमी कसरी त्यो लेख्न सक्छौ? यो सम्भव छैन ! र अझै, त्यो मैले महसुस गरें। यो तेस्रो विश्वका सबै मानिसहरूले महसुस गरे। चाहे चीन कम्युनिष्ट थियो कि थिएन, त्यो समस्या थिएन। उनी हाम्रो गर्व थियो। र यो एक युरोपेलीले बुझ्न असम्भव छ। "त्यो पनि उनले हाँसोको साथ स्वीकार गर्दै ठट्टा गरे:" तिमी के चाहन्छौ, मसँग पुरानो औपनिवेशिक परिसर छ, त्यो मेरो कथा हो ... "
आज पनि, मँ छु र म ट्युनिसियन महसुस गर्छु
यसको इतिहास सँधै, यसको इतिहास विशेष गरी ट्युनिसियाको, जसमा अन्तसम्म उसले ध्यान दिएन, कोमल र स्वेच्छाले आलोचनात्मक नजर राख्यो। बेन अलीको पतनको क्रान्ति पछि १० बर्ष पछि उनले मदत गर्न सकेनन् तर देश कसरी अड्किरहेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए जहाँ पुरुष र महिलालाई आवश्यक पर्ने नयाँ प्रेरणा दिन सक्षम भए। २०१ 2019 मा राष्ट्रपति चुनेका कास साएद र जसलाई उनले पहिलो पटक जून २०२० मा एलिसी प्यालेसमा आयोजित आधिकारिक डिनरमा भेटेका थिए, उनले उनलाई राम्रो प्रभाव पारेका थिए। उनले विश्वास गरे कि उनले आफैंमा "फ्रान्सेइस मिटरान्डको शान्त शक्ति" भेट्टाए र ब्याजसहित सत्तामा पहिलो कदमहरू पछ्याए।
"आज पनि म हुँ र म ट्युनिसियाली महसुस गर्छु", उनले दोहोर्याए, उनले अन्तिम दशकपछि पनि फ्रान्सेली नागरिकताको लागि प्रशासनिक झन्झटलाई सीमित तुल्याउन पनि निर्णय गरे पनि। "मैले फ्रान्समा कहिले पनि मतदान गरेको छैन र म त्यहाँ कहिले पनि मतदान गर्ने छैन," उनले स्पष्ट गर्नमा हतार गरे। र जब मलाई भनिएको छ: "महोदय, तपाईं जन्मजात हुनुहुन्छ ...", म जवाफ दिन्छु: "होइन, म ट्युनिसियाली हुँ, उत्पत्तिबाट होईन"। "
ला रेवू को साहसिक
80० को उमेरमा, कहिले Jeune Afrique आधा शताब्दी पुगेको, उनले आफ्ना छोराहरू, अमीर र मारवाने र व्यवस्थापकीय सम्पादक फ्रान्स्वाइस सौदान मिलेर बनेको तिकुलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। साप्ताहिक रूपमा उनका सम्पादकीयहरू प्रकाशित गर्दै, प्रसिद्ध "म के विश्वास गर्दछु", उनी बिस्तारै आफ्नो अन्तिम प्रोजेक्ट: ला रेभूको रूपमा प्रस्तुत गरेको कुरालाई सुरू गर्न अखबारबाट टाढा गएका थिए। २०० title मा शीर्षक शीर्षक JA लाई पूरकको एक प्रकारको रूपमा सुरू गरियो र जुन उसले मासिक बनाउन चाहान्छ। "फ्रेन्चमा पहिलो जनरल मासिक" उनले उनले तुरुन्तै उनको प्रश्न गर्ने पत्रकार क्रिस्टो बोइस्बुभियरलाई बताउँदै भने: "तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, म महत्वाकांक्षालाई अँगाल्ने गर्छु जुन मेरो औकात भन्दा बढी छ"।
अमीर र मारवानेसँग अब पूर्ण शक्ति छ। तिनीहरूको प्रतिबिम्ब बाट अर्को युवा अफ्रीका जन्म हुनेछ
दस बर्ष पछि, ला रेभ्यूले यसको संस्थापकहरूले स्थापना गरेका ठूला महत्त्वाकांक्षाहरू हासिल गर्न सकेनन्, तर यो अझै छ, द्विमासिक रूपमा प्रकाशित गरियो, र यसको सयौं अंकमा पुग्दै छ। "संसारको केन्द्र जताततै छ" वा "संसारले तपाईले कहिल्यै पढ्नु भएको छैन" जस्ता केही वाक्यहरूमा सारांशित सम्पादकीय लाइनमा विश्वासयोग्य यस पत्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूलाई बीबीवाइ, स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रवृत्तिसँग स्वीकार गर्दछ। विषयहरू यसको आफ्नो रूचि केन्द्रहरू प्रतिबिम्बित। अमेरिकी राजनीति। ठूला उभरते देशहरूको उदय। वैकल्पिक शक्ति र इलेक्ट्रिक कार। बीसौं शताब्दी को इतिहास। राजनीतिक इस्लाम। इरान र फारस खाडी राजतन्त्र। ट्युनिसिया, अवश्य पनि ... "यो एक अर्ध सम्पादकीय सफलता र अर्ध वाणिज्यिक विफलता हो", बिना कटुता बीबीवाइले अवलोकन गर्दछ, जसलाई यस किसिमका अप्ठ्यारो सूत्रहरू मन पराउँछन्, जस्तो कि अक्सर आएर आउँथ्यो जुन उनले आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए। उनलाई थाहा थियो कि यो विवादको बिषयमा छ: "म विश्वास गर्दछु, सही हो कि गलत, तर मेरो विचारमा गलत होईन ..."
Jeune Afriqueयसै बीचमा, उहाँविना आफ्नो जीवन बिताउनुभयो, र यदि यो पत्रिका अब उसले १ 1960 .० मा स्थापना गरेको हो भने, उनले भने कि मलाई यसको कुनै पछुतो छैन। "मेरा छोराहरू अमीर र मारवानेसँग अब सबै शक्ति छ," उनले भने। अर्को तिनीहरूको परावर्तनबाट देखा पर्नेछ Jeune Afrique "। उनले आफूलाई सहज सल्लाह दिए जसलाई प्रख्यात शेरनिटी प्रार्थनाबाट अनुकूलित गरिएको अन्तिम सल्लाह दिए: "तपाईले परिवर्तन गर्न सक्ने सबै कुरा परिवर्तन गर्ने इच्छा छ, जुन तपाईले गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरालाई ग्रहण गर्ने बुद्धि।" परिवर्तन, बुद्धिमत्ता हामी बीचको भिन्नता परिवर्तन हुन सक्छ र के हामीले स्वीकार्नु पर्छ। "
रहस्यमय, BBY? “म मुस्लिम संस्कृतिको हुँ। मलाई कुरान थाहा छ। मलाई थाहा छ उहाँ को हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ इस्लाम के हो, म यस धर्ममा हुर्केको थिएँ। म एक विश्वासी, धार्मिक, र एक व्यवसायी भएको छु। म अब होइन। मानौं कि आज, म आफूलाई अज्ञेयवादी भन्छु, "उनले वर्णन गरे। र यदि उनले भने कि म प्रार्थनाबाट पछि हटेको हुँ, मक्का यात्रा गर्ने चाहाना थिएन र अनन्त जीवनमा कम र कम विश्वास गर्यो भने, उनले स्वीकार गरे: आत्मविश्वास हरायो। मलाई पक्का निश्चित छैन कि "पछि" केहि छैन। "
यो लेख https://www.jeuneafrique.com/1165521/cult/bechir-ben-yahmed-un-africain-dans-le-siecle/ मा पहिलो देखा पर्‍यो
मानिसहरु DNA परीक्षणमा भाग लिन्छन उनीहरुको जातीय मूल - SANTE PLUS MAG पत्ता लगाउनका लागि
हिराकमा घुसपैठ गरेको आरोप लगाएको इस्लामवादी आन्दोलन रचद को हुन्? - युवा अफ्रिका